बाबुराम भट्टराईको पार्टी उनकै प्रदेशमा रित्तै - Samadhan News
समाधान संवाददाता २०७९ जेठ ८ गते १६:३०
डा. बाबुराम भट्टराईको गृहप्रदेश पनि हो गण्डकी । उनी अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष छन् । डा. भट्टराईको जिल्ला गोरखा हो । नगपालिका पालुङटार । पालुङटारको मेयरमा भट्टराईको पार्टीले एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो ।
कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन नमिलेपछि मौन अवधि सुरु हुनै लाग्दामात्रै उनले एमालेसँग गठबन्धन गरे । त्यसको प्रचार हुन सकेन । मतदान गर्ने बेला छाता चिन्हमा मत हालेको फोटो सार्वजनिक गरेर भट्टराईले आफ्ना उम्मेदवारको प्रचार गरे ।
पालुङटारमा जसपाका मेयर उम्मेदवार प्रेम गुरुङ हारे । माओवादीका विवश चिन्तनले जिते । गोरखाका अरु पालिकामा पनि जसपाको कुनै उम्मेदवारले जितेनन् । अझ गण्डकी प्रदेशभरमै पनि जसपाको उपस्थिति शून्य भएको छ ।
भट्टराईको गृहजिल्ला गोरखाका १० तहमध्ये कुनै पनि तहमा जसपाले जित निकाल्न सकेन् । गोरखामा माओवादी केन्द्रले ९ र नेपाली कांग्रेसले २ पालिका प्रमुख जितेको छ ।
लमजुङका ८ स्थानीय तहमा एमाले र कांग्रेसले ४-४ वटा स्थानीय तहका प्रमुखमा जित निकालेको छ । तनहुँका ८ स्थानीय तहमध्ये नेपाली कांग्रेस ४, माओवादी केन्द्र १ र एमालेले ४ स्थानिय तहका प्रमुख जितेको छ । व्यास नगरपालिकाको भने अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गृहनगरसमेत रहेको व्यासमा सुरुदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीले अग्रता लिएका छन् ।
११ स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा नेपाली कांग्रेसले ५ र एमालेले ६ स्थानीय तहमा जित निकालेको छ । कास्कीमा एमालेले ४ र कांग्रेसले ४ स्थानिय तहका प्रमुख जितेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको मतपरिणाम आउन बाँकी छ । यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले अग्रता राखेका छन् ।
मुस्ताङका ५ स्थानिय तहमध्ये एमालेले ४ र कांग्रेसले १ तहका प्रमुखमा जित निकालेको छ । पर्वतका ६ तहमध्ये एमाले ४ र कांग्रेस २ वटा तहका प्रमुखमा विजयी भएको छ । बाग्लुङका १० स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस ६, माओवादी केन्द्र १, राष्ट्रिय जनमोर्चा २ र एमाले १ वटा तहका प्रमुखमा जित निकालेको छ । नवलपुरका ८ स्थानीय तहमध्ये एमाले ६ र कांग्रेस २ तहमा विजयी भएको छ ।